October 9, 2021 - ApannPyay Media
မြက်ခြောက် ကျွေးရတာအားနာလို့၊ မြက်စိမ်းအဖြစ်မြင်ရမယ့် မျက်မှန်တွေကို နွားတွေမှာတပ်ပေး
October 9, 2021 by ApannPyay Media
မြက်ခြောက် ကျွေးရတာအားနာလို့၊ မြက်စိမ်းအဖြစ်မြင်ရမယ့် မျက်မှန်တွေကို နွားတွေမှာတပ်ပေး ရုရှားနိုင်ငံက မွေးမြူရေးတောင်သူတွေဟာ နွားတွေကို မြက်ခြောက်ကျွေးရတာ အားနာလွန်းလို့၊ မြက်စိမ်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ့်မျက်မှန်တွေကို နွားတွေမှာတပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီမျက်မှန်တွေကို တိရစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်တွေက စမ်းသပ်ထုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ Virtual reality glasses လို့ အလွယ်ပြောလို့ရပြီး၊ နွားတွေအနေနဲ့ မြက်ခြောက်တွေကို စားနေရခြင်းမှ စိတ်သက်သာရာရစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမျက်မှန်တွေရဲ့အစွမ်းကြောင့် ခြောက်သွေ့နေတဲ့မျက်ခင်းတွေဟာ သူတို့အမြင်မှာ စိမ်းနေရုံသာမက ဆောင်းလိုရာသီမျိုးမှာ နေကို မြင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီမျက်မှန်တွေကို မော်စကိုပြင်ပက နို့စားနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စတင်စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ ဒီမျက်မှန်တွေကို တပ်ခြင်းအားဖြင့် နွားတွေဟာ နဂိုကထက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အစာအစားနှုန်း ပိုတက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး နို့ထွက်အားလည်း ကောင်းလာပါသတဲ့။ မော်စကိုက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးက ” ဒီလိုမျက်မှန်တွေက နွားတွေကို နွေရာသီမျက်ခင်းမျိုး … Read more
သြဇာသီး ရဲ့ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး ၂၁ ချက် သြဇာသီး လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အရသာ ကောင်းသလောက် စားရတာအလွန်လက်ဝင်တဲ့ ရုပ်ဆိုးဆိုးအသီးကြီးကို ဆိုလိုမှန်း လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ချိုမြတဲ့အရသာနဲ့မှမလိုက် ပေါပေါများများပါလာတတ်တဲ့ အစေ့တွေကို လက်ဝင်အောင်ဖယ်စားရတာ၊ ဒီအစေ့တွေကို သြဇာစေ့တောက်တမ်းကစားကြတာတွေက ငယ်ဘဝကာလတွေမှာ အမှတ်တရ အချိန်တွေပါပဲ။ဒီအသီးကို အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေက ရှာရီဖာလို့ ခေါ်ကြပြီးတော့ အစိမ်းအတိုင်းအပြင် ကိတ်မုန့်တွေ မုန့်အချိုတွေ လုပ်စားတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာတွေကတော့ အစိမ်းအတိုင်း စားကြတာများပါတယ်။ သြဇာသီး ဟာ အရသာကောင်းမွန်သလို ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဗီတာမင် ဘီ၊ ဗီတာမင် B6၊ ဗီတာမင် စီနဲ့ Antioxidant တွေပါဝင်နေပြီး အရေပြား၊ ဆံပင်၊ မျက်လုံး၊ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးတို့ကို အထောက်အကူပြုတဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးပါ။ … Read more
ရိုးရိုးမွေးမဲ့ မေမေတို့ရဲ့ အမေးများဆုံး မေးခွန်းများ ၁ ။ မိန်းမကိုယ်ချဲ့တာနာလား မနာပါဘူးနော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မွေးခါနီးရင် မိန်းမကိုယ်က နာတာတွေ မေမေတိုင်း ကြုံရပါတယ် တကယ်မွေးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း မိန်းမကိုယ်က ကျင်ထုံနေတာနဲ့ ချဲ့လိုက်တာ သိနေရပေမဲ့ လုံးဝမနာပါဘူး ၂ ။ ပြန်ချုပ်ရင်ရော အစိမ်းချုပ်တာလား နာလား ပြန်ချုပ်ရင်လည်း ထုံဆေးနဲ့ချုပ်ပေးတာပါ ထုံဆေးကလည်း ဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးရတာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ထုံဆေးအရည်ကိုသုံးတာပါ ထုံဆေးအရည်လောင်းလိုက်ချုပ်လိုက်လုပ်တာမို့ လုံးဝ မနာပါဘူး ၃ ။ ဗိုက်နာရင် ဘယ်လိုညှစ်ရမှာလဲ ဗိုက်နာတာနဲ့ ညှစ်စရာမလိုပါဘူး ဗိုက်နာပီး အီးပါချင်သလိုဖြစ်လာမှ သားအိမ်က သူ့အလိုလို ညှစ်လာတာပါ အဲ့အခါကျမှ ကိုယ်က အလိုက်သင့်လေးအားထည့်ညှစ်ပေးလိုက်ရမှာပါ ဗိုက်နာတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ညှစ်နေရင် ကိုယ်ပဲမောမှာပါ ကလေးကထွက်မလာပါဘူး ကလေးထွက်ချင်ပီဆို သားအိမ်ကသူ့အလိုလိုကို ညှစ်လာတာပါ … Read more
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဖျက်စီးပြီးနောက် ဦးကျော်သူရဲ့အခြေအနေ
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဖျက်စီးပြီးနောက် ဦးကျော်သူရဲ့အခြေအနေ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင်ကျော်သူက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်အကြောင်းနဲ့ သုဘရာဇာအလုပ်အကြောင်းကို အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ကျော်သူက ကိုရီးယားမှာပေါ့ဗျာ၊ အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရီးယားလို မိတ်ဆက်ပေးတော့ ပြုံးပြလေရဲ့၊ ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်၊ အသုဘလည်းချတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် သုဘရာဇာလို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးရော ပြုံးပြယုံတင်မကတော့ဘူး အတင်းလက်ကိုဆွဲကိုင်ဖက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတော့တာဘဲဗျာ။တစ်ချို့ဆိုရင် ထမင်းစားပွဲမှာ တကယ့်အဓိကဧည့်သည်တော်တွေထိုင်တဲ့ ထိပ်ဆုံးထိုင်ခုံမှာနေရာချပေး၊ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော် အခန်းအနားဖွင့်ပွဲမှာ ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးခိုင်းလို ခိုင်းနေရာပေးလိုက်ကြတာလေ၊ ဒါကလူကြီးကော၊ လူငယ်ကော၊ မိန်းမကြီးကော၊ မိန်းမငယ်လေးတွေကောဗျ၊သူဌေးကော၊ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကော ပြည်သူအရပ်သားကောဗျ၊ အားလုံးကတစ်ပုံစံထဲဆက်ဆံမှုတုန့်ပြန်မှုတွေတစ်ထပ်ထဲဗျာ။ မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့အရင်ကပေါ့ဗျာ၊ မင်းသားပါဆိုတော့ ပြုံးပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ရင်ရိုက် အော်တိုထိုးခိုင်းရင်ခိုင်းပေါ့၊သုဘရာဇာဆိုတာနဲ့ မျက်နှာပျက်ပြီ းနူတ်ခမ်းမဲ့ရွဲ့ပြီး ဝေးဝေးကိုရှောင်ထွက်သွားလေရဲ့၊ ဒါဟာပြည်ပနိုင်ငံနဲ ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ဗျာ။ ဪ ၊ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့မျာ းဒီလောက်အယူသည်းကြပါလိမ့်လို့၊ ဒွိဟဖြစ်မိပါရဲ့ဗျာ ဆိုပြီး တော့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit နာေရးကူညီမႈအသင္းကို ဖ်က္စီးၿပီးေနာက္ ဦးေက်ာ္သူရဲ့အေျခအေန … Read more
မန္တလေးမြို့ မင်္ဂလာမန္တလေးရှိ မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် မီးလောင်နေမှု(ရုပ်သံ)
မန္တလေးမြို့ မင်္ဂလာမန္တလေးရှိ မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် မီးလောင်နေမှု(ရုပ်သံ) မန္တလေးမြို့ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင် အချိန်(၁)နာရီကျော်အကြာ မီးလောင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ (၇၃)လမ်းရှိ မျိုးသိန်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွင် ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့ နံနက် (၇)နာရီကျော်က စပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာ Level2ယာဉ်အုပ်စုများက ငြှိမ်းသတ်ရပြီး နံနက်(၈)နာရီခွဲအချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် လောင်ကျွမ်းသည်ကို စစ်ဆေးနေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မန်တလေးမွို့ရှိ လြှပျစစျပစ်စညျးဆိုငျ အခြိနျ(၁)နာရီကြောျအကွာ မီးလောငျ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ခမြျးမွသာစညျမွို့နယျ၊ (၇၃)လမျးရှိ မြိုးသိနျး လြှပျစစျပစ်စညျးဆိုငျတှငျ ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစျ အောကျတိုဘာလ(၁၀)ရကျနေ့ နံနကျ (၇)နာရီကြောျက စပွီး မီးလောငျမှု ဖွစျပှားရာ Level2ယာဉျအုပျစုမြားက ငွှိမျးသတျရပွီး … Read more
ကျောက်ကပ်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင် သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၉) မျိုး
ကျောက်ကပ်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင် သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ (၉) မျိုး ကျောက်ကပ်ရောဂါဟာ ထူးခြားတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာမပြတဲ့အတွက် ရောဂါကျွမ်းတဲ့ အခြေအနေရောက်မှသာ သိကြတာမို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားမိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. အချိန်တိုင်းလိုလိုမောပန်းနေခြင်း ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ် အတောက်တွေ များလာစေသလို သွေးမသန့်တော့တာကြောင့် မောပန်းပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းလာတတ်ပါတယ်။အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလာကာ မူးဝေခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်လာပြီဆို ရင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ၂. ခံတွင်းပျက်ခြင်း ကျောက်ကပ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ များလာတဲ့အတွက် ခံတွင်းပျက် တာဖြစ်နိုင်သလို လျှာက ကောင်း ကောင်းအရသာ မခံနိုင်တဲ့အတွက် အလိုလို အစားနည်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ၃. မျက်လုံးတစ်ဝိုက် မို့နေခြင်း ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေတဲ့အခါ အဆိပ်အတောက်တွေ စစ်ထုတ် နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာတဲ့အတွက် … Read more
လာမည့် (၂) ရက်အတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနှင့် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း မိုးကြီးရေလျှံခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်
လာမည့် (၂) ရက်အတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနှင့် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း မိုးကြီးရေလျှံခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင် လာမည့်နှစ်ရက်အတွင်း(အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ရက်)လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင်လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း မိုးဇလဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလအတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသုံးကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတစ်ကြိမ်မှာ မုန် တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိတွင်လေထုမငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်နေပြီးမုတ်သုန်ဆုတ်ခွာချိန်ဖြစ်သည့်အတွက်နိုင်ငံတွင်း နေရာအချို့တွင်မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ထွန်းကာလေပြင်းတိုက်ခြင်း၊မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်မုတ်သုန်အားကောင်းနေသည့်အတွက် ရန်ကုန် အပါအဝင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခြင်း၊မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မိုးဇလမှ ခန့်မှန်းပေးထားပါတယ်။ မိုးလေဝသစေတနာရှင်မလေးစုစုစံခန့်မှန်းချက်အရ”ရခိုင်ရိုးမအရှေ့သတိ။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှမုန်တိုင်းတွေရဲ့အထက်လေစီး UAC upper air circulation conditions များသည် မြန်မာနိုင်ငံကိုအရှေ့မှအေနောက်သို့လာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာအမြင့်ပေ၁၅၀၀၀၀မှ ၁၈၀၀၀၀အမြင့်လေဝဲလည်လာမယ့်လေထုသည်မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးရိုးမပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါပေ၅၀၀၀အထိစိုက်ဆင်းလာမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ရိုးမနှင့်ထိတွေ့ကာ အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက် ၁၃ရက်တွေမှာရခိုင်ရိုးမအရှေ့ဖက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်သဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းအနောက်ပိုင်း ပဲခူးတိုင်းအနောက်ပိုင်း ပြည်ခရိုင် မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်း သရက်ခရိုင်မင်းတုန်း မကွေးခရိုင် မင်းဘူးခရိုင် စကု ပွင့်ဖြူ ရွှေစက်တော်လပဒါန်း မံဇလီ … Read more
ဆန်လှော်စားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး ဆန်လှော်။ ။ဆန်လှော်သည်နှလုံးပူပန်၊အစာအိမ်အချဉ်ပြန်၊အပူပြန်၊ရေငတ်၊အပူဝမ်းရောဂါတို.ကိုပျောက်ကင်းစေသည်။ ဆန်ဆေးရည်။ ။သွေး၊သည်းခြေငြိမ်စေ၍ဝမ်းရပ်စေသည်။အနာကင်းအနာပေါက်တို.ကိုပျောက်ကင်းစေသည်။အပူဝမ်းသက်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေသည်။ ထမင်းရည်။ ။(ဂုဏ် ၈ပါး)အစာကိုများစွာစားနိုင်ခြင်း၊ဆီးရွှင်စေခြင်း၊အသက်ရှည်ခြင်း၊သွေးသားပွားစေခြင်း၊အဖျား၊သလိပ်၊သည်းခြေ၊လေတို.ကိုနိုင်ခြင်းဂုဏ်၈ပါးရှိသည်။ ဝမ်းရောဂါ။ ။ကာလဝမ်းအပူဝမ်းဖြစ်လျှင်အသက်သာမှီပါစေအောက်ပါဆေးနည်းသည်ဒိဋ္ဌပျောက်သောဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။ (ဆန်ကိုနီရဲလာအောင်လှော်ပြီးရေထည့်ထားသောကြွေဇလုံထဲလောင်းထည့်ပါအခိုးငြိမ်းလျှင်၎င်းရေကိုလူနာအားတိုက်ပေးပါ၊ရေတောင်းတိုင်း၎င်းရေကိုတိုက်ပေးပါ)လက်တွေ.နည်းဖြစ်သည်။ရေထပ်ရောနိုင်သည်။ ဝမ်းသွေးလွန်ရောဂါ။ ။ထမင်းခြောက်ကိုလှော်ပြီးထန်းလျက်နဲ.ဆတူညက်အောင်ကြိတ်၍စားပျောက်၏။ နားပင်းရောဂါ။ ။သွေးကင်းငုတ်၍နားပင်းသောရောဂါအတွက်ကြောင်လျာသီးကိုသံပုရာရည်နှင့်သုတ်စား၊ပုဇွန်ထုပ်မီးဖုတ်ကိုရှောက်သီးနှင့်သုပ်စား၊နောက်ထပ်ဆီထမင်းကိုစား၊နှမ်းဆီနှင့်နားကိုကျပ်ပေးပါ။နားပင်းရောဂါပျောက်၏။ မီးဖိုချောင်မှဆေးစွမ်းကောင်းများ AlinYaung Magway Crd – opo by TYT ဆန္ေလွာ္စားျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး ဆန္ေလွာ္။ ။ဆန္ေလွာ္သည္ႏွလံုးပူပန္၊အစာအိမ္အခ်ဥ္ျပန္၊အပူျပန္၊ေရငတ္၊အပူဝမ္းေရာဂါတို.ကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ဆန္ေဆးရည္။ ။ေသြး၊သည္းေျခၿငိမ္ေစ၍ဝမ္းရပ္ေစသည္။အနာကင္းအနာေပါက္တို.ကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အပူဝမ္းသက္ျခင္းကိုေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ထမင္းရည္။ ။(ဂုဏ္ ၈ပါး)အစာကိုမ်ားစြာစားႏိုင္ျခင္း၊ဆီးရႊင္ေစျခင္း၊အသက္ရွည္ျခင္း၊ေသြးသားပြားေစျခင္း၊အဖ်ား၊သလိပ္၊သည္းေျခ၊ေလတို.ကိုႏိုင္ျခင္းဂုဏ္၈ပါးရွိသည္။ ဝမ္းေရာဂါ။ ။ကာလဝမ္းအပူဝမ္းျဖစ္လ်ွင္အသက္သာမွီပါေစေအာက္ပါေဆးနည္းသည္ဒိ႒ေပ်ာက္ေသာေဆးနည္းျဖစ္ပါသည္။ (ဆန္ကိုနီရဲလာေအာင္ေလွာ္ၿပီးေရထည့္ထားေသာေႂကြဇလံုထဲေလာင္းထည့္ပါအခိုးၿငိမ္းလ်ွင္၎ေရကိုလူနာအားတိုက္ေပးပါ၊ေရေတာင္းတိုင္း၎ေရကိုတိုက္ေပးပါ)လက္ေတြ.နည္းျဖစ္သည္။ေရထပ္ေရာႏိုင္သည္။ ဝမ္းေသြးလြန္ေရာဂါ။ ။ထမင္းေျခာက္ကိုေလွာ္ၿပီးထန္းလ်က္နဲ.ဆတူညက္ေအာင္ႀကိတ္၍စားေပ်ာက္၏။ နားပင္းေရာဂါ။ ။ေသြးကင္းငုတ္၍နားပင္းေသာေရာဂါအတြက္ေၾကာင္လ်ာသီးကိုသံပုရာရည္ႏွင့္သုတ္စား၊ပုဇြန္ထုပ္မီးဖုတ္ကိုေရွာက္သီးႏွင့္သုပ္စား၊ေနာက္ထပ္ဆီထမင္းကိုစား၊ႏွမ္းဆီႏွင့္နားကိုက်ပ္ေပးပါ။နားပင္းေရာဂါေပ်ာက္၏။ မီးဖိုေခ်ာင္မွေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား AlinYaung Magway Crd – opo by TYT
စက္ကန့် ၃၀ နဲ့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးမယ်
စက္ကန့် ၃၀ နဲ့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးမယ် အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က အားနည်းလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ၂ နှစ်ကို တစ်ခါ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက အကြံပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖို့ မအားရင် အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ စစ်ဆေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးဖို့ စက္ကန့် ၃၀ ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ လက်သည်းထိပ်ပိုင်းကို မြဲမြဲမြံမြံညှစ်ခြင်း ညာဘက်လက်မနဲ့ ညာဘက်လက်ညှိုးကိုသုံးပြီး ဘယ်ဘက်လက်ချောင်းတွေရဲ့ လက်သည်းထိပ်တွေကို ၃ စက္ကန့်ကနေ ၅ စက္ကန့်ကြာအောင် ညှစ်ပါ။ လက်ချောင်း တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်း ညှစ်သွားကြည့်ပါ။ ညှစ်ထားတာကို လွှတ်လိုက်ရင် ၂ စက္ကန့်အတွင်း လက်သည်းမှာ သွေးရောင်ပြန် နီလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ … Read more
မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၉၀ နဲ့ လေလံအောင်သွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းချီကား
မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၉၀ နဲ့ လေလံအောင်သွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းချီကား တော်လှန်ရေးအတွက် လုံးဝသွေးမအေးဘဲ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်အားဖြည့်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများရဲ့ အပတ်စဉ်ရံပုံငွေရှာ​ဖွေ​ရေးအတွက် ​စျေးရောင်းချပွဲကို အောက်တို ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာ ဂီ တ ရိုးရာတိုင်းရင်းသား ဂီ တ အကများနဲ့ မြန်မာ့အစားအစာ အစုံအလင် ပါဝင်သော ကြယ်စင်များရဲ့အလင်းကောင်းကင် လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ရံပုံငွေရှာဖွေပွဲကြီးကို လန်ဒန်အနောက်ပိုင်း Feltham မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ကြယ်စင်များရဲ့အလင်းကောင်းကင်ပွဲမှာ လန်ဒန်နိုင်ငံက တော်လှန်ရေးမှာ တတပ်တအား ပါဝင်ကြတယ့် မိသားစုတွေ အပန်းပြေစေဖို့Live Music & Karaoke အစီအစဉ် အစားသောက်မျိုးစုံ ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ် ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်ဝယ်ယူပြီး အမှတ် … Read more